Ny vavaka rivotra iainana – FJKM Ambavahadimitafo Ny vavaka rivotra iainana |
Ny vavaka rivotra iainana
« Mivavaha ka aza mitsahatra » (1 Tes.5,17)
« Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka » (Lio.18,1).
Ny vatana izay omen’Andriamanitra antsika dia manampy betsaka amin’ny fiorenana sy fitomboana amin’ny harem-panahy araka an’Andriamanitra.
Ny orona sy ny asa fototra tanterahiny ao amin’ny tenantsika sy ny fiainantsika andavanandro, mampiditra sy mamoaka ny rivotra iainana, dia manampy antsika hahatakatra tsara ny hevitr’ireo Tenin’Andriamanitra voalaza etsy ambony ireo sy ny anjara toeran’ny VAVAKA eo amin’ny fiainantsika kristianina.
1) Miasa tsy mitsahatra ny orona, na tsaroan’ny olona na tsy tsaroany, mba hahatsara ny fiainan’ny isam-batan’olona. Ilaina toy izany koa ny VAVAKA tsy mitsahatra mba hahatsara ny fiainam-panahin’ny tsirairay, ny fiainam-panahin’ny Fiangonana ary ny fiainana amin’ny ankapobeny eto amin’izao tontolo izao.
Noho izany « Mivavaha ka aza mitsahatra » (1 Tes.5,17). 2) Miasa tsy mitsahatra ny orona ary tsy reraka. Na reraka ny olona, tsy maintsy miasa hatrany ny orona. Amin’ny fotoana mahasempotra ny olona indrindra aza no vao mainka koa iasan’ny orona mafy dia mafy.
Toy izany tsy misy hafa ny VAVAKA. Arakaraka ny ahatsiarovana harerahana sy fahasemporana ary ady sarotra lalovana eo amin’ny fiainana andavanandro no ilana koa fitomboana sy faharetana amin’ny VAVAKA.
Marina tokoa izany fa « Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka » (Lio.18,1). Asa miantoka ny fahavelomana sy fahavitan’ny raharaha rehetra ataon’ny olona ny asan’ny orona. Asa miantoka ny fahavelomana sy fahatsaran’ny fiainam-panahin’ny olona ny VAVAKA.